WARBIXIN: 5 Qof Ee Sababta U Ahayd Guul Daradii PSG Kasoo Gaartay PSG Oo La Shaaciyay %
WARBIXIN: 5 Qof Ee Sababta U Ahayd Guul Daradii PSG Kasoo Gaartay PSG Oo La Shaaciyay
Kooxda kubada cagta PSG, ayaa gul daro qaraar waxay kaga soo hartay Champions League, kadib markii labada lugood ee wareega 16-ka ay dharbaaxo kulul ay kala soo kulantay Boqorada La Liga, ee Real Madrid.
Hadaba, halkaan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa ciyaartoyda iyo shaqsiyaadka ay PSG Jamaahiirteeda ay ku eedeeyeen guul daradaan xanuunka badan, taasoo ay Champions League uga soo hareen.
Tababarahaan, kaasoo la aaminsan yahay in heshiiska uu kooxdaan ku joogo ay qeyb ka tahay inuu kooxda u qaado Champions League, ayaa waxaa hada uu yahay mid laga yaabo in la ceeriyo kadib markii ay soo hareen.
Labo bedal oo uu sameeyay ciyaartii ay la dheeleen Real Madrid ayaa keentay inay la kulmaan guul daro xanuun badan, waxaana kooxdiisa ay ahayd mid xakameyn weysay Marcos Asensio, kaasoo kulanka saameyn ku lahaa.
Laacibkaan reer Italy wuxuu qaatay Casaan xili kooxdiisa ay ubaahneed, waxaana la dhihi karaa wuxuu ahaa mid si Olakac ah usameyeeyay, maadaama uu maankiisa ku hayay inuu horey Kaar Jaalo ah loogu taagay.
Sikastaba, in 25-sano jirkaan uu garoonka ka baxo iyadoo kooxdiisa gool lagu hogaaminayo ayaa soo dejisay in laga taag-roonaado, inkastoo gool ay heleen kadib bixitaankiisa, hadana ma aysan kusii nagadaan.
Garabkiisa midig oo inta badan ahaa mid iska furan iyo qaladaadkiisa oo badnaa ayaa waxay keentay in lagu eedeeyo guul darada PSG, waxaana dhiciisa ay ahayd meelaha ugu badan oo ay kasoo duulaan tagayeen xidiga Madrid.
Marcelo, Asensio iyo Toni Kroos ayaa si fiican uga faa’ideystay Fag-fagta badan ee daafacii hore ee Barcelona, sidoo kale Cristiano Ronaldo ayaa halkaas ka helay, waxaana Alves uu yahay mid eeda qeyb ku leh.
Inkastoo uu gool dhaliyay, hadana wax shaqo oo fiican taasoo lagu amaani karo ma usan ka qaban xidigaan garoonka, waxaana la dhihi karaa kama uusan soo dhalaalin shaqadii ay udirsadeen maamulka PSG.
Sergio Ramos, ayaa wuxuu ahaa mid si fiican ula socday dhaqdhaqaaqa Edison Cavani, kaasoo fursado badan oo halis ah garoonka ka sameeyay.
Xidigaan ma uusan ka sameyn garoonka wax badan oo shaqo ah, isagoona umuuqda mid wali ubaahan ah wax xoogaa qaan-gaarinimo ah.
Weerar yahankaan dalka Faransiiska udhashay, waxaa laga filiyay in ugu yaraan uu shaqo wanaagsan garoonka maqan doono, laakiin waxaad moodaa inuu ku dhex-lumay guud ahaan garoonka mana uusan muuqan wax badan.
Champions LeaguePSG vs Real Madrid
Xidig Ka Tirsanaa Real Oo ‘Balaayo Xun U Saadaaliyay Messi’ Hadii Ay Barca Hanato La Liga
Guardiola Oo Aaminsan In Leo Uu Oo Qof Walba Ka Dhigi Karo Mid Fiican [Ogow Sababta]